Zimbabwean Embassy UK
Home - Contact details of Zimbabwean embassy and Zimbabwean embassy website in UK.
Zimbabwean Visa - Information on Zimbabwean tourist visa, business visa and other Zimbabwean visas.
Zimbabwean Visa Form - Zimbabwean visa application forms for travel as a tourist or for business.
Weather in Zimbabwe - Weather forecasts for cities in Zimbabwe
Zimbabwe Tourist Info - Tourist information and travel guides for Zimbabwe.
Zimbabwean Money - Zimbabwean money Euro and currency exchange rate for Euro.
Zimbabwean Language - Zimbabwean holiday phrases and Zimbabwean dictionary online
Airports in Zimbabwe - International and domestic airports in Zimbabwe with airport codes
Public Transport - Airports, Bus, Ferries, Trains and Taxis in Zimbabwe.
Map of Zimbabwe - Geography of Zimbabwe and maps of Zimbabwe.
Public Holidays - National and public holidays in Zimbabwe.
Zimbabwe Nightlife - Bars, Cinemas, Night Clubs, Restaurants and Theaters in Zimbabwe.
Hotels in Zimbabwe - Hotels, hostels and Motels in Zimbabwe.
Zimbabwe Facts - General information about Zimbabwe, history of Zimbabwe and communication
Zimbabwean Food - Pasta to Pizza - Information about Zimbabwean food and drinks.
Things To Do - Holiday activities in Zimbabwe including sight-seeing tours and sports activities.
Zimbabwe Area Codes - Telephone area codes for cities of Zimbabwe.
Zimbabwean Embassy in London
London WC2R 0JR.
Tel: 020 7836 7755 - Fax: 020 7379 1167
Street Map of Zimbabwean embassy
Zimbabwean embassy Opening Hours
Zimbabwean Consulate in London
Street Map of Zimbabwean consulate
Zimbabwean Consulate Opening Hours
Zimbabwean Visa Office
Street Map of Zimbabwean Visa Section
Zimbabwean Visa Section Opening Hours
TrevelGuideChannel.com presents top tourist attractions in Zimbabwe, shopping and nightlife and what to do and see while you are in lovely Zimbabwe.
General Services Offered At The Zimbabwean Embassy In UK
About Us We are here to provide general information about the Zimbabwean embassy in the United Kingdom and has no affiliation with the Zimbabwean embassy or the Zimbabwean visa section in London. To find out more click on About Us or Disclaimer Statement.
Consular Assistance - The Zimbabwean consulate can assist with consular services to Zimbabwean citizens. This service encompasses, render support in the case of an accident, the case of death, and arrange for next of kin to be informed, facilitate during emergency situations such as civil disturbances and natural disasters and furthermore witness and certify signatures and provide certain other notarial and legal services, for which fees are payable.
Zimbabwean Passport - Zimbabwean citizens could also get the Zimbabwean passport application form and procedures to submit an application for Zimbabwean passport or travel documents by speaking with the Zimbabwean Embassy in London.
Zimbabwean Visa - The Zimbabwean Embassies and Consular Offices are the only Competent Zimbabwean Government Agencies, who are allowed to issue Zimbabwean visas in another country. any risks which might arise when boarding flights or at Zimbabwean ports of entry due to possible miscommunication, travellers are strongly recommended to apply with the Zimbabwean Embassy and Consular Offices in United Kingdom to get Zimbabwean visas before travelling.